Shiinaha warshad xaashiyaha gelatin 3.3g iyo alaableyda | Gelken
3.3g gelatin sheet sidoo kale loo yaqaan xaashi gelatin naxaas ah (3.3g). Caadi ahaan, xooggaxaashi gelatin naxaas ah (3.3g) waa 180 ubaxyada. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin-geedka wuxuu la mid yahay gelatin caadi ah, laakiin wuxuu ku jiraa qaab xaashida ah. Waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo moofo mousse, iwm.
Tusaale ahaan, mooska jiiska loo yaqaan 'matcha cheese mousse' waxaa lagu sameeyaa iyada oo la jebiyo buskudka dheef-shiidka ee mashiinka wax lagu kariyo laguna dhex daro dareeraha subagga dhalaalay. Hubso inaad si fiican isugu qasto ka dibna ku shub afarta inji oo wareegsan oo wareega ah, hoose ee caaryada wareega wareega xusuusnow inaad suufka warqad saliid ah ku duubto ka hor markaa ku soo ururi madaxa birta duubista, hubi inaad isku soo koobto, isku soo koob ku rid qaboojiyaha keydka qaboojiyaha; Kiniiniga gelatin ku rid baaquli, ka dibna ku shub biyo qabow oo saxanka ku dar; Jiis jilicsan oo sonkor sonkor leh ku kari. baaquli yar oo ku dhalaal 30 garaam oo biyo kulul ah. Sababta oo ah budada matcha ay adagtahay in la dhalaaliyo, hubi inaad aad u walaaqdo. Ku shub matcha weelka jiiska oo isticmaal qalab koronto ku shaqeeya si aad isugu qasto. Hubso inaad si fiican iskugu qasdo, ku dar caleemaha jilicsan ee jilicsan caanaha, ka dibna kuleyli caanaha biyo si aad si fiican ugu dhalaasho warqadda gelatin-ka. u fur daaqada si aad u garaacdo Ka dibna waxaan garaaci doonnaa kareemka khafiifka ah illaa uu ka gaarayo 7 waana qaybin doonaa, ilaa uu qaro noqdo oo tartiib tartiib tartiib ah ayuu u socon doonaa; Ka dibna isku dar kareemka fudud iyo jiiska Ku shub burcadda jiiska farmaajo mousse qaboojiyaha. (Cuntadani waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo laba 4-inji oo wasakh ah oo wareega ah.) Qabow habeenkii.
Hore: 2g Xaashida Gelatin
Xiga: 5g Xaashida Gelatin